Mitady ny renivohitry ny Lanna fahizay, milentika ao amin'ny spa Royal taloha | DDDD
Home / Interior design / Mitady ny renivohitry ny Lanna fahizay, milentika ao amin'ny spa Royal taloha | DDDD
2021 / 07 / 25 FisokajianaInterior design 5269 0
Ny vovoka dia latsaka ao anaty hazavana sy fotoana marobe
Ny zavona sy ando milentika amin'ny tany mavo
Tranobe vy sy beton i Shenzhen. Ny tabataban'ny tanàna, ny jiro mamiratra. Ny DDD Creative dia notendren'ny tompony hamolavola toerana ho an'ny fanorana Thai sy spaoro tena izy ao afovoan-tanàna.
Ny fiheveran'ny ankamaroan'ny olona an'i Thailand dia mbola mijanona ao anaty ala maitso, sary sokitra hazo ary elefanta, saingy raha ny tena izy dia maro ny lafiny kolontsaina tsy raharahiana izay mbola tsy notadiavina, toa ny vohitra fahagola, ny vakoka ara-tantara ary ny rindrin'ny tany mavo no mariky ny tantara.
▲ Ireo fitaovana ambanivohitra sy singa miloko | Loharanon-tsary
Chiang Mai no loharanon'ny fanorana Thai sy SPA taloha. Ny endriny dia mifototra amin'ny biriky mena amin'ny rindrin'ny tanànan'ny Chiang Mai taloha, ary ny firafitry ny rano amin'ireo sosona mihetsiketsika dia manako ny maitso tropikaly izay miseho tsy ampoizina. Ny endriny dia mifototra amin'ny singa biriky mena ao amin'ny tanànan'ny Chiang Mai taloha, ary ny fiakaran'ny rano mihoampampana sy mihoampampana dia akon'ny zavamaniry tropikaly.
▲Ny trano dia fitoeran-jaza hisamborana hazavana | Loharano sary
▲ Biriky mena eo amin'ny facade
Ny efitrano fidirana alohan'ny fidirana dia ampiasaina ho toy ny faritra fiandrasana sy faritra fampisehoana hanokana ny feo mitabataba amin'ny arabe ivelany. Hita taratra amin'ny rindrina biriky mena ny jiro amin'ny alàlan'ny mangarahara manjelanjelatra eo am-baravarankely amin'ny varavarana lehibe sy ny verana avana lava.
▲Ny mazava dia manome fanahy ny habakabaka
Ny feo ankapobeny amin'ny habaka dia ny "vovoka malemy", ary ny loko mitovy amin'ny fitaovana Retro toy ny biriky mena, vato fisaka manify, terrazzo, lamba miloko mena ary taila antitra mena-tany dia mifangaro hanehoana ny tanànan'i Lanna taloha.
▲ Ny lohahevitra lehibe amin'ny hetsika dia ny “Taom-baovao”.
▲ Faritra fanadiovana ny tongotra
Ny fitsangatsanganana an-tongotra miaraka amina fahitana tropikaly tropikaly, ny fotsy fotsy eo an-tampony ary ny rahona miverimberina tsy misy fetra amin'ny alàlan'ny fitaratra, dia toa ao anaty zaridaina taloha.
Inspiration aingam-panahy fitaovana ｜ Source Source
▲ Fanaka vita amin'ny ratana
▲ aingam-panahy amin'ny famolavolana lambam-baravarana mihantona source Loharanon-tsary
▲ lamba rongony vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba mihantona
Ny famolavolana ny rindrina dia entanin'ny zavamaniry tropikaly, ny sokitra hazo Chiang Mai teratany, ny anana sy ny fitaovana. Ny fanaka vita amin'ny ratana sy ny fizarazarana amin'ny lamba, lamba rongony matevina vita printy mihantona, jiro rano mitsingevana eny ambonin'ny zavona rano sy fanaka malefaka hafa dia manasongadina ny tontolon'ny fiainana eo an-toerana tamin'ny lasa.
▲ Ilay tavoahangy fitehirizana zava-mahadomelina volontany
▲ Faritra miandry
Ny rivotra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia maimbo veromanitra, ary re ny feon'ny rano mikoriana, miaraka amin'ny tavoahangy fitehirizana zava-maitso mavo mavo ho semi-partition. Ny tena mampiavaka ny tetikasa dia ny fomba tsara hampiasana tsara ny habaka amin'ny fitehirizana ny fahitana malalaka.
. Birao eo aloha
Miakatra amin'ny karipetra malefaka mankany amin'ny rihana faharoa, mampindrana fitaratra ny famolavolana, vera mangarahara, ambainy lamba mavesatra ary jamba tsy misy mangarahara. Mampiasa fitaratra, vera mangarahara, ambainy lamba mavesatra ary lamba hafa mangarahara ny endrika hamoronana eo anelanelan'ny firafitry ny gorodona, minia mamorona eritreritra ny fahatsapana, mba hahafahan'ny olona very ny tenany eo amin'ny tontolo iainana ary tsy hifantoka afa-tsy amin'ny fihetseham-pony manokana. fotoana
Ny tampon'ny tohatra dia fanahy iniana nopotserina mba hananganana dobo biriky mena mihombo mba hanatsara ny fahatsapana ny fivezivezena eo anelanelan'ny tranobe taloha. Mitsinkafona tsikelikely ireo rahona misavoana any an-tampony, ary miova hatrany ny onjam-peo rehefa mandehandeha ny olona.
▲ dobo biriky mena miangona
Ny tara-masoandro any ivelan'ny varavarankely dia miditra ao anaty dobo amin'ny elanelan'ny varavarankely hazo, taratra amin'ireo zavamaniry tropikaly sy lamba nolokoana, mitsonika ao anaty zavona ao anaty rano, manintona ny fitadidiana hiverina amin'ilay ilan'ny vovoka.
Inspiration aingam-panahy hanitra manitra voajanahary source Loharano sary
▲ Fametrahana pisinina
Ny habakabaka mena feno tany dia mamoaka fofona manitra veromanitra, ary ny voron-vorona tsara sy ny feon'ny rano mikoriana tsy misy farany. Niniana natao ny endrika, manetsika ny fahatsapana ny fahitana, ny fofona ary ny fihainoana mba hampitony ny onja anaty. Ny famolavolana ny trano fandraisam-bahiny dia santatry ny dia an'ny SPA taloha, izay toerana mangina sy milamina ao amin'ny tanàna taloha.
Curtain Ambainy mavesatra ary hazavana manjavozavo
Ny efitrano fanorana sy ny efitrano SPA dia mampiasa ambainy mavesatra sy jiro mavesatra mba hamoronana fahatsapana fiainana manokana sy filaminana. Niniana avela ny toerana fotsy mba hahafahan'ny olona manakimpy ny masony ary mametraka ny vatany sy ny sainy amin'ny dia ara-batana an'ny Thai SPA.
▲ Kanto fametrahana efitrano fanorana
Room Efitra SPA ｜ Diaben'ny vatana mangina
Ao amin'ny fananganana marika, ny orinasa mpamorona DDDD dia te hanome ny marika sy traikefa an'ny renivohitr'i Lanna, Thailandy, hitondra ny tany mavo amin'ny marika taloha - izany hoe "LOESS". Ny marika marika LOESSSPA dia vokatry ny fandrefesana ny hatevin'ny fotoana sy ny fitadidiana.
Ny loko lehibe amin'ny rindrin'ny tanàna dia ny loko mavo eto an-tany an'ny marika, ary ny aloky ny hazavana eo amin'ny rindrin'ny tanàna amin'ny aloky ny hazo no tena mason'ny marika.
▲ Ny loko lehibe an'ny marika
Ny fonosana vokatra dia mampiasa ny sary hosodoko amin'ny zavamaniry tropikaly handanjalanjana ny halehiben'ny loko lehibe amin'ny rindrin'ny tanàna ary hahatonga ny atin'ny marika ho mavitrika sy manankarena kokoa.
▲ Brand Visual
Plan Drafitra rihana 1F
Plan Drafitra rihana 2F
▲ Sarin'ny fisandratana 2F
Anaran'ny tetikasa ｜ LOESSSPA Lanyu
Toerana misy ny tetikasa ｜ Shenzhen, Sina
Tetikasa ｜ Spa Thai
Faritra tetikasa ｜ 283㎡
Daty famitana ｜ 2021.1
Drafitra famolavolana, paikady sy fametrahana toerana marika, rafitry ny mason'ny marika, fonosana vokatra vita amin'ny marika, famolavolana habakabaka, endrika famolavolana malefaka, famolavolana jiro
Orinasa mpamorona ｜ DDDD
Orinasa mpamorona (DDDD Creative Company)
Famoronana endrika ｜ John Sun Sun Weizhong
Fametrahana marika ｜ Renee Zhu 朱 尔 年
Famoronana endrika Visual Hua Sen
Fanaraha-maso ny tetikasa ｜ Liu He
Famolavolana lalina ｜ Qia Qia, Ma Xiaoting, Chen Yonglin
Photography Project ｜ Wu Jianquan
Fitaovana lehibe ｜ Tile: Volom-bato vita amin'ny voromahery voromahery: Vatonam-bato VENEER
Terrazzo ： LVBA MOSHI Flooring: Armstrong
Mpanorina DDDD sy mpamorona firaka
DDDD, ny marika "DDDD" amin'ny teny sinoa. Voatonona amin'ny teny Cantonese, izany hoe ny fandikana ireo naoty efatra fanokafana ny «Destiny» faha-XNUMX an'i Beethoven nitarina. Ny famoronana ny Symphony of Destiny no fahatapahan'i Beethoven anjara. Asa mozika mahafinaritra izy ity, asa misy filozofia matanjaka sy fomba kanto. Ny asa mozika iray, naoty marihina, dia mitovy, izay midika fa ny fiaraha-miasa sy ny fahatakarana ny fahatokisana tanteraka ihany no afaka mamorona endrika varotra mahomby. Nahazo aingam-panahy tamin'ity asa mozika ity i DDDD ary manantena ny hampita ilay hevitra fa ny habaka dia tsy fisiana vatana fotsiny fa fanehoana fihetsem-po amin'ny alàlan'ny famolavolana. Ny naoty efatra fanokafana "Destiny" dia matetika ampiasaina amin'ny mozikan'ny fidirana lehibe, ary milaza ihany koa fa ny famolavolana dia mila tsy ho voafehin'ny eritreritra mba hamokarana asa izay manome valiny mahatalanjona. ny ekipa DDDD dia mifantoka amin'ny famotehana ny fisainana nentim-paharazana sy ny fahazoana hery sy tanjaka amin'ny sehatry ny varotra. Mampiroborobo ny fifandraisana sy ny fahasambarana amin'ny alàlan'ny famolavolana izahay, ary mandinika bebe kokoa ny fikatsahana ny tena endrik'ilay famolavolana amin'ny fihaonana amin'ny ambaratonga kanto.
Previous :: Famolavolana miverina amin'ny natiora, zoro mangina ivelan'ny fiainana an-tanàna | Yuanhe Daqian Next: Ny mpivady, ny loholona roa, ny taranaka telo mitovy endrika amin'ny endrika famolavolana!
2021 / 08 / 15 6073